Ukuba uye waya kwimimandla esenyakatho, njengaye,, kunye ne-Italia, njengaye, uyazi ukuba izinto ezikwimenyu yendawo yokutyela aziyi kufana kwaye, ngokuxhomekeke kwindawo okhethileyo ukuyidla, ingabhalwa isiTaliyane esingaqhelekanga.
Kungenxa yokuba ummandla ngamnye waseItali, kwaye ngamaxesha amaninzi, izixeko ezizimeleyo, zineepiti zazo , okanye izitya zendabuko. Ngaphezulu, ngamanye amaxesha into efanayo ingabizwa ngokuba yizinto ezahlukeneyo ezisenyakatho ukuya ngasentla, njengendlela eyaziwayo ngokubizwa ngokuba yi- schiacciata eTuscany.
Nangona kukho ukungafani okuya kudibana nayo, kukho imilinganiselo ongayifunda ngayo ngokukhawuleza ekudleni e-Itali, kwaye ngakumbi, ukwazi ukufunda imenyu yase-Italy.
Kule khokelo elikhawulezayo, ndiya kuhamba ngeentlobo zokutyela e-Italy, njani ukwenza ukugcinwa, ukulandelelana kwezidlo zaseNtaliyane ngexesha lokutya, indlela yokucela i-bill, kunye nezinye iimbambano zenkcubeko ezinokuba luncedo kuwe .
Iintlobo zokutyela e-Itali
I-Autogrill - Ibha ye-snack bar
I-Pizza al taglio - Yithengisa ukuba uthengise iinqunto ze-pizza ezityunwe ngawaphi ofuna
Tavola calda - Indawo yokutyela engaqhelekanga, njengendawo yokutya njengokuba uhlala uthumela isitayela se-buffet
I-Osteria - Indawo yokutyela engaqhelekanga, njenge-diner
I-Trattoria - Ivenkile yokutya eqhelekileyo edlalwa yintsapho
Ristorante - Irestyu
Unokufunda isigama esithile ngokubhekiselele kumava okutya apha. Ukuba ufuna ukufunda amabinzana aza kukunceda ufumane iindawo zokutyela ezichanekileyo kwaye ufumane iingcebiso ezilungileyo, nqakraza apha .
Indlela yokwenza ukuKhuselwa
Nangona akuqhelekanga ukwenza iindawo zokubhuka kuzo zonke iindawo zokutyela e-Italy, kuyacetyiswa kwiindawo ezithandanayo okanye zithandwa kakhulu, ezithandwa kakhulu.
Ukwenza ukugcinwa kwabantu ababini ngo-8: 00, sebenzisa eli binzana elithi: Vorrei fare una prenotazione ngexesha elifanelekileyo, ukuya kwi-otto .
Ukuba ufuna ukucaca ngakumbi, nqakraza apha ukuze ufunde iintsuku zeveki, kwaye nqakraza apha ukuze ufunde indlela yokuxelela ixesha .
Umyalelo weZitya zaseTaliyane
EItali, izitya zidlalwa kwiiplate ezihlukeneyo ngendlela ethile. Ngendlela yokubonakala kwimenyu eqhelekileyo kukho:
I-antipasto, okoqobo ithetha "ngaphambi kokutya" kwaye ibandakanya izibheno ezinobushushu nabandayo, ezifana ne- crostini kunye ne- bruschetta.
Il primo, okanye "ikhosi yokuqala" ngokuqhelekileyo iquka,,, okanye (isobho).
Il secondo, okanye "iklasi yesibili," kwaye yinkambo ephambili - rhoqo,, okanye.
Il contorno, okanye "isitya esingasecaleni," esineziqhamo ezifana (isitshalo seqanda), (isipinashi), okanye (isaladi edibeneyo).
Il dolce, okanye "i-dessert," ebandakanya iipesele ezintandokazi njenge tiramisù , torta della nonna (i-custard shortbread pie), okanye (ukugcinwa kweengqayi zeqanda ngewayini kunye ne-brandy).
Yenza iBhili (okanye kufuneka uhambe ngecebo?)
Ukucela i-bill, tshi : I-conto, nge favore . Ngaphandle kokuba ucele, akunakwenzeka ukuba baya kuzisa iteksi kuwe. Xa kuziwa ekutheni, ngumthetho waseTaliyane, ukungahlawulwanga kufakwe kwi-bill, kwaye ukukhutshwa okungekho mfuneko akuyimfuneko. Khumbula ukuba i- coperto - umrhumo wekhava-ifakiwe kwakhona. Ukuba le nkonzo iyavuma ukuba, yikhululeke ukushiya umncedisi wakho ngokunye okunye.
Ukuba ufuna umncedisi ukuba alondoloze utshintsho, yithi: Tenga i-clean il resto .
EItali, loo miqoqo e-milky- cappuccino kunye ne- caffè latte- isetyenziswa kuphela kwisidlo sasekuseni, ngoko-ngaphambi kwe-11 ekuseni. Ukuze ufunde kabanzi ngeentlobo zekhofi e-Italy, nqakraza apha .
I-dente ithetha "kwizinyo," okanye i-chewy. Kusetyenziswa ukuchaza ipasta kunye nelayisi. Ingaphakathi kufuneka ibe yintengiso.
AmaTaliyane ahlala athi uBuon appetito ! okanye "Jabulela isidlo sakho" xa kuqhutywa iklasi yokuqala, kwaye Songa ! okanye "kwimpilo yakho" xa uhlamba isiselo.
Kungenzeka ukuba kufuneka uthenge amanzi. Uza kuba nokukhetha phakathi kwamanzi- frizzante okanye i- gas con - okanye rhoqo amanzi- liscia okanye naturale .
Yiyiphi i-Best Dictionary yabafundi baseJamani?
Amazwi aseNtaliyane esebenzisa iLizwi leNdlela
Ixesha leNtetho leNtetho yaseNtaliyane
Indlela yokubala ukuya kwi-10 ngeSpanish
Iimpawu zoNgcino: Indlela isiFrentshi eshukumise ngayo isiNgesi
Izigidi, iCandelo leDiplopoda
I-SUNY Cobleskill Admissions
Iingcaphuno ezivela kwiV Vetetta
IziThuthi ezinhlanu zokuSebenzisana kweziThutho zabaFundi
Indlela Yokugwema Ukukhwabanisa kunye neRash eyenziwa yi-Bike Shorts
I-Penn State iBerks Admissions